Teôria mpizara no tadiavin'i China diode laser 980nm fanesorana vaskola / Laser fanesorana ny lalan-dra mpanamboatra sy mpamatsy | LaserTell
Theory of Distributor dia maniry diode laser 980nm fanesorana vaskola / fanesorana ny lalan-dra laser
980nm diode laser spider vein machine dia ny fitrandrahana optimum optimum ny sela porphyrin vaskules. Ny sela sela dia mitroka ny laser highenergy an'ny halavan'ny 980nm, mitranga ny fanamafisana ary tapaka tanteraka. Raha ampitahaina amin'ny fomba nentim-paharazana, ny laser 980nm diode dia afaka mampihena ny mena, ny fandoroana ny hoditra. Izy io koa dia manana vintana kely kokoa amin'ny fampitahorana. Mba hahatratrarana tsara kokoa ny tavy kendrena, ny angovo laser dia atolotry ny tànana famolavolana matihanina. Manampy amin'ny taratra infrared 635nm, mamela ny angovo hifantoka.
Ny laser dia afaka manentana ny fitomboan'ny collerm dermal raha toa ny fitsaboana ny lalan-dra, mampitombo ny hatevin'ny epidermaly sy ny hakitroky azy, hany ka tsy miharihary intsony ireo lalan-dra kely, miaraka amin'izay koa dia nohamafisina ihany koa ny elastika sy ny fanoherana. Aorian'ny fitrandrahana angovo laser, ny oxyhemoglobin dia mamokatra angovo hafanana ary miparitaka amin'ny sela endothelial vaskular amin'ny alàlan'ny mekanisma fampidirana. Vokatr'izany dia simba ny rindrin'ny lalan-dra ary hotsaboina ny lalan-dra.
2. Fiasan'ny Distributor maniry diode laser 980nm fanesorana vaskola / Laser fanesorana lalan-dra:
1) Fanesorana ny lalan-dra: tarehy, sandry, tongotra ary ny vatana iray manontolo
2) Fitsaboana ratra amin'ny pigment: teboka, teboka amin'ny taona, sunburn, pigmentation
3) Ra mifono ra
4) Fanalana ny ra Lalana
5) Famafana ny lalan-dra, lesoka vaskola sns
6) Fanesorana holatra
8) Famerenana amin'ny hoditra
3. Tombontsoa ho an'ny Distributor tadiavina diode laser 980nm fanesorana lalan-dra / Fanesorana lalan-dra laser:
1. Ny fanesorana vovo laser 980nm dia ny teknolojia mandroso indrindra eo amin'ny tsena.
2. Mora dia mora ny fandidiana. Tsy misy ratra, tsy mandeha rà, tsy misy fery avy eo.
3. Ny fikirakirana matihanina amin'ny tanana dia mora ampiasaina
4. Fitsaboana iray na roa fotoana dia ampy hanesorana ny lalan-drà maharitra.
5. Ny vokatra dia mety haharitra kokoa noho ny fomba nentim-paharazana.
6. Ny herin'ny fivoahana farany ambony dia mety hahatratra 30W
4. Famaritana ny Distributor tadiavina diode laser 980nm fanesorana lalan-dra / Laser fanesorana lalan-dra:
halavan'ny onjam 980nm
Seho amin'ny efijery Efijery mikasika loko 10.4inch
Mode Pulse, CW
Herin'ny laser 30W
Famantarana Taratra infrared 635nm
Milanja lanja 12kg
Zintin'aratra 110 / 220V, 50HZ / 60HZ
5. Alohan'ny sy aorian'ny
Previous: Newest Alemana bara epilation portable maharitra alexandrite 808nm dioda laser volo fanesorana volo vidiny saloon
Manaraka: Fanesorana volo laser amin'ny teknolojia vaovao miaraka amin'ny teknolojia fibre tsy misy fampiasa azo ampiasaina amin'ny masinina laser 808nm Optical
Vokatra asongadina, Sitemap, Esory ny fanesorana volo amin'ny Shr Ipl, Laser Module 808, Laser Epilator Ipl, 3 amin'ny 1 Ipl, Jiro Flash Ipl Xenon, Diode fanesorana volo laser amin'ny trano, Vokatra rehetra Room 308, No.12, Jingsheng South 2nd Road, Distrikan'i Tongzhou, Beijing, Sina